Manchester United Iyo Liverpool Oo Xiiseynaya Ibrahima Konate
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Manchester United iyo Liverpool oo xiiseynaya Ibrahima Konate
Manchester United iyo Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay labaduba xiiseynayaan saxiixa daafaca dhexe ee RB Leipzig Ibrahima Konate inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Labada ciyaaryahan ee ka ciyaara Premier League ayaa dhawaanahan la hadal hayey inay madaxa la aadi doonaan saxiixa Dayot Upamecano ka hor xilli ciyaareedka 2021-22.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Bild , labada ciyaaryahan ee Ingariiska ah ayaa sidoo kale labaduba xiiseynaya saaxiibkii kooxda Upamecano ee Leipzig Konate, kaasoo qandaraaskiisa haatan lagu burburin karo of 40m (£ 35m).
Saxafiga Christian Falk ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Tottenham Hotspur ay si dhaw ula socoto xaalada, iyada oo kooxda reer London loo malaynayo in ay doonayso in ay horumariso daafaceeda xagaagan.
Konate ayaa kaliya lix kulan ka soo muuqday Bundesliga inta lagu jiro xilli ciyaareedkaan, isagoo la dhibtoonayay dhaawac.
21 jirkaan ayaa ciyaaray dhamaan lixda kulan ee Leipzig ee Champions League-ga heerka guruubyada, in kastoo uu ka caawiyay kooxda reer Jarmal inay u soo baxdo wareega 16-ka ee tartanka iyadoo ay qarash gareyneyso United
Previous articleWest Ham oo amaah ku qaadatay Jesse Lingard.
Next articleRoman Abramovich oo ku bixiyey £ 112.5M magdhow si uu u ceyriyo tababarayaasha Chelsea